Yaa Farmaajo ku qasbay Khudbadda uu ku taageeray Golaha Wadatashiga Qaranka? - XAL DOON
Home NEWS Yaa Farmaajo ku qasbay Khudbadda uu ku taageeray Golaha Wadatashiga Qaranka?
Yaa Farmaajo ku qasbay Khudbadda uu ku taageeray Golaha Wadatashiga Qaranka?
Villa Somalia ayaa baahisay khudbad laga soo duubay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saacado la sugayay kahor baahinteeda.
Farmaajo ayaa 8 Daqiiqo kusoo koobay khudbaddiisa oo waqti badan la jarjarayay si looga reebo qaladaadka iyo hadallada is dafka ah ee inta badan khudbadaha ka raaco.
Fariinta Farmaajo waxaa ka muuqday niyad-jab, dabac ku yimid hadalladii uu ku weerarayay doorashooyinka si uu u baajiyo in uu gudbinayo fariin ka duwan kuwiisii hore.
Yaa ka dambeeyay hadal jeedinta Farmaajo?
Sida Xaldoon ay u xaqiijiyeen ilo ku dhaw Villa Somalia, waxa uu xiriir telefoon dhexmaray wakiilo ka socda Beesha Caalamka iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wadahadalkaas waxaa Farmaajo loogu goodiyay in haddii uu kahor yimaado shirka golaha wadatashiga qaranka oo heerka uu soo maray marqaati ka yihiin maadaama ay ka qaybgaleen.
Farmaajo waxa ay wakiilada Beesha Caalamka ku qasbeen in uu duubo khudbad uu ku taageerayo heshiiska Doorashooyinka haddii kale ciqaab adag lagu soo rogi doono.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay go’aanka ah in uu khudbadda duubo si afkiisa looga diiwaangeliyo in uu taageero buuxda u yahay heshiiska iskana dhaafay carqaladeynta.
Farmaajo maxay u diideen in ay garab istaagaan Madaxda saaxiibka la ah?
Guuldarrada ugu weyn ee uu la kulmay Farmaajo ayaa ah in uu garab ka waayay Madaxweynayaasha Dowlad-Goboleedyada Galmudug, Koofur Galbeed, Hir-Shabeelle & Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Farmaajo waxa uu ku qasbanaaday in uu kaligii garramo oo uu isku jawaabo isla markaana uu isku buriyo, balse marnaba kama bixin xeendaabka uu doortay ee ah in uu qaatay cadaadiska beesha Caalamka oo ah taageerista Heshiiska.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhaawacyo siyaasiyeed la kulmayay tan iyo wixii dambeeyay Febaraayo 2021, waxa uu isku dayay in uu is hor istaago doorashooyinka Soomaaliya muddo sanad ah oo uu sharci darro ku joogo Villa Somalia.
Farmaajo sidee ayuu dhaawaca siyaasadeed u gaaray?
Qof weliba daah kama saarna in dhiigbaxa siyaasadeed ee siyaasadda Farmaajo uu bilawday Febaraayo 2021 markii uu weeraray hoteel ay joogeen Madaxweyneyaashii ka horreeyay Xasan Sheekh & Shariif Sheekh Axmed iyo guddoomiyihii Baarlamaanka Shariif Xasan.
Isla maalintaas waxa uu wadada Garoonka diyaaradaha iyo KM4 isku xirta ku weeraray Musharixiin dibadbax nabadeed dhiganayay, si ay u muujiyaan in Dalka Doorasho u baahan yahay.
Dhiigbaxa siyaasadeed ee kale Farmaajo waxa uu gaaray markii uu Maxamed Mursal u gudbiyay muddo kororsi labo sano ah, balse waxaa ka dhashay dagaal caasimadda ka qarxay balse May 2021 waxa uu wareejiyay mas’uuliyadda Amniga & Doorashooyinka.
Farmaajo ayaa ceeb iyo foolxumo kala kulmay kiiskii Ikraan Tahliil oo ah sarkaalad katirsan NISA, waxa ay ceebtiisa bannaanka timid markii xilka laga qaaday Agaasimihii NISA Fahay Yaasiin balse uu diidan, maalmo kaddib waxa uu ka dhigtay la taliyhiisa amniga.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas kuma hakan oo waxa uu sii watay dambiyada kala duwan uu dalka ka geystay muddada 5ta sano ah, waxa uu isku dayay afgambi uu la damcay Xafiiska RW Maxamed Xuseen Rooble 27kii December 2021 laakiin sidii uu rabay ma dhicin.
Gunaanadkii, Khubaddii Farmaajo mala dhihi karaa waxa ay ahayd fursaddii ugu dambeysay uu kula hadlay Shacabka?